Inkakha kamaskandi emdlalweni kamabonakude | News24
Inkakha kamaskandi emdlalweni kamabonakude
Durban – Inkakha yomculo kamaskandi uMfiliseni “Mqabulasheshe” Magubane uzobonakala emdlalweni wochungechunge osihloko sithi Uzalo ozoqala ukukhonjiswa kumabonakude maduze.
Ngokubika kweDaily Sun uMagubane uzokhombisa elinye ikhono lakhe kwezokulingisa kulo mdlalo ozobe ukhonjiswa kuSABC 1 kuwona lo nyaka.
Lo mculi oneminyaka engu-49 ubudala wodumo lwengoma ethi Natasha uthe okwamanje akavumelekile ukuchaza ngendawo azoyidlala.
“Ngiyaqinisekisa ukuthi ngizolingisa kulo mdlalo kodwa angivumelekile ukukudalula,” kusho lo mculi okuzophinde kuzwakale izingoma zakhe kuwona lo mdlalo ozogxila kakhulu ezintweni ezithinta ulimi, usiko nokunye kwesiZulu.
OLUNYE UDABA:Owayegijima kuMaZulu uthokozela ukucula umaskandi
UMagubane uthe umatasa uqopha izingoma ezizozwakala kulo mdlalo nebika lawo njengoba eveze ukuthi ezinye izingoma seziqediwe.
UMagubane akamusha ekuqopheni izingoma zemidlalo eyahlukene njengoba eseke waqopha izingoma zamafilimu nezeshashalazi okubalwa iSarafina!, Township Fever, Magic at 4 AM neMaria Maria.
Lo mdlalo Uzalo unabaqondisi abathathu abadumile okubalwa kubo uDuma KaNdlovu ongumsunguli weMuvhango, uGugu Zuma oyindodakazi kaMengameli Jacob Zuma obuye abe ngumlingisikazi nosomabhizinisi uPepsi Pokane.